माघ ८, २०७६ | 22nd January, 2020
सडेको अवस्थामा आमा–छोरीको शव फेला, श्रीमान फरार
२४ मंसिर, पर्सा । वीरगञ्जमा सडेको अवस्थामा आमा–छोरीको शव फेला परेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. १२ शिवनगर नयाँ टोलमा मोहन झाको घरमा डेरा लिएर बस्दै आएकी आमा छोरीको सव फेला परेको छ । बारा कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं. २६ सिसुवा महेशपुरका पवन साहकी अन्दाजी २२ वर्षीया श्रीमती र अढाई वर्षकी छोरी मृत भेटिएका […]
वडाध्यक्षमाथि बोक्साको आरोप लगाउँदै कालोमोसो लगाएर मलमूत्र खुवाउने प्रयास
२४ मंसिर , काठमाडौं । इच्छामनकामना गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष पञ्चबहादुर चेपाङलाई बोक्साको आरोपमा स्थानीयले कालोमोसो लगाउनुका साथै मलमूत्र खुवाउने प्रयास गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । नेपालकै लोपोन्मुख जातिको सूचीमा रहेका चेपाङलाई स्थानीयको एक समूहले कुटपिट गर्दै जुत्ताको माला लगाएर कालोमोसो दलेपछि गाउँसमेत परिक्रममा गराएका थिए । वडा भवनको कार्यालय सार्ने विषयमा बिवाद भएपछि चेपाङलाई […]
२३ मंसिर, काठमाडौं । कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या भएको १६ महिनापछि पनि अनुसन्धानको सुई पुरानै आरोपी दिलपसिंह विष्टवरिपरि घुमिरहेको छ । निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरण घाँटीमा बिझेको काँडासरह अनुभूति भइरहेका बेला प्रहरीले पछिल्लो पटक अनुसन्धानको सुई विष्टतर्फ घुमाएको हो । केही दिनअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) प्रमुख […]
२३ मंसिर, काठमाडौं । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको मर्मसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता बढेको छ । भ्रष्टाचारको उजुरी, मुद्दाको सङ्ख्या र दायर मुद्दाको सफलताको प्रतिशत पछिल्ला वर्षहरूमा वृद्धि भएको हो । यसलाई नागरिकमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना वृद्धि भएको र आयोगको सक्रियता बढेको दुवै अर्थमा बुझ्ने गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार […]
२३ मंसिर, चितवन । गाडीको ठक्करबाट एक जना प्रहरी हवल्दारको मृत्यु भएको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-१ रामनगरमा आइतबार राति ११ बजे प्रहरीचौकी रामनगरबाट भरतपुरतर्फ आउने क्रममा बा १७ च ५७५८ नम्बरको बोलेरो गाडीले पाठक चढेको ना ५५ प १४२५ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मृतु भएका हुन् । मृत्यु हुनेमा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका-१० घर भई […]
लमजुङमा बस दुर्घटना : एकको मृत्यु, सात घाइते
मंसीर २२, लमजुङ । लमजुङ जिल्लामा आइतबार बिहान ७ बजे बस दुर्घटना हुँदा १ जना यात्रुको मृत्यु भएको छ भने ७ जना यात्रुहरु गम्भीर घाइते भएका छन् । बेंसी शहरबाट गोरखा जाँदै गरेको ग १ ख ५७९९ नम्बरको बस सुन्दर बजार नगरपालिका-७ पाउँदीमा दुर्घटना हुँदा ३० वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनाका […]
कारखानामा भीषण आगलागी हुँदा ३५ को मृत्यु, ५० बढीको उद्धार
एजेन्सी, मंसिर २२ । भारतको नयाँ दिल्लीस्थित एक कारखानामा आगलागी हुँदा ३५ को मृत्यु भएको छ । आइबार बिहान आगलागी हुँदा ५० बढी व्यक्तिलाई बाहिर निकालिएको दिल्ली दमकल विभागका मुख्य अधिकारी अतुल गर्गले जानकारी दिए । धेरैजसो मानिसहरु धुँवाका कारण प्रभावित भएको उनले बताए । आगो ६ सय स्क्वायर फिटको जग्गामा लागेको हो । यो […]
सुनसरी जिल्लामा भिषण आगलागी
मंसीर २२, इटहरी । सुनसरी जिल्लाको इटहरी बजारको मुख्य चौकमा रहेको सूर्य कम्प्लेक्समा भिषण आगलागी भएको छ । सूर्य कम्प्लेक्स स्थित हाेटल बिगबारबाट राति १ बजेबाट सुरू भएकाे आगो बिहान करिब ४ बजे नियन्त्रणमा लिइएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ । आगोबाट हाेटल बिगबार पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएकाे छ भने तल्लाे तलामा रहेकाे […]
चितवनमा अटो रिक्सा दुर्घटना : ५ जनाको मृत्यु
२१ मंसिर, चितवन । चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा शनिबार साँझ साँझ ६ः२० तिर अटो रिक्सा दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा १ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । चेपाङमार्ग भएर चौकी डाँडातर्फ आउँदै गरेको ना १ ह ६४०९ नम्बरको अटो भण्डारा बजारबाट केहि किलोमिटर उत्तरमा चेपाङ राजमार्ग अन्तर्गत […]
घुस लिएको आरोप लागेका दोलखाका सिडिओ रिजाल काठमाडौं तानिए
२० कात्तिक, काठमाडौं । दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाललाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । घुस लिएको आरोप लागेका उनलाई गृह मन्त्रालय तानिएको छ । रिजालमाथि मेलुङ गाउँपालिका–४ भेड्पुका कुमार लामा मोक्तानले ९० हजार र कालिञ्चोक गाउँपालिका–१ का उदिम तामाङ र इन्द्रबहादुर तामाङले २१ हजार घुस लिएको आरोप पत्रकार सम्मेलन गरेर लगाएका थिए ।
१९ मंसिर, बुटवल । जीप दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु भएको छ ।बुटवलबाट पाल्पाको तानसेन जाँदै गरेको लु१ज ४२०९ नम्बरको जीप पाल्पाको केराबारी र चौबिस माइलको बीचमा दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको सनाखत भएको छैन । जीपमा कतिजना सवार थिए भन्ने यकिन नभएको प्रहरीले बताए ।
जीप दुर्घटनावाट मृत्यु भएका १४ जनाकै पहिचान खुल्याे, १ बेपत्ता
१६ मंसिर । बडिगाड गाउँपालिका-७ घोपर्नामा लु १ ज ५२१९ नम्बरको जीप दुर्घटनावाट ज्यान गुमाएका १४ जनामध्ये १० जनाकाे पहिचान खुलेको छ । घटनामा एक जना बेपत्ता छन् । मृत्यु हुनेमा सुचना कार्की, जीप चालक रेश्म थापा, बसुन्धरा कार्की, माया थापा, सीता कार्कीं, दुई वर्षीया अनुशा कार्की, झवी कार्की, महेन्द्र कार्की, भूमी कार्की, मिना बस्नेत, […]
जीप दुर्घटना हुँदा १४ जनाको मृत्यु, ३ घाइते
१७ मंसिर, गुल्मी । जीप दुर्घटना हुँदा १४ जनाको मृत्यु भएको छ । गुल्मीको इश्मा गाउँपालिकाबाट कूल पूजाका लागि गुल्मी जाँदै गरेको ग१ज ५२१९ नम्बरको जीप बागलुङको भीमगिठेमा दुर्घटना हुँदा ३ जना घाइते भएका छन् भने एक जना बेपत्ता भएका छन् । दुर्घटनामा ९ महिला, ४ जना पुरुष र एक जना बालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको […]
१५ मंसिर, मोरङ । मोरङवाट गाँजा सहित ३ जना पक्राउ परेका छन । सुन्दरहरैचा नगपालिका-१० खोर्साने चोकवाट पक्राउ पर्नेमा बेलबारी नगरपालिका १ बस्ने २४ बर्षीय लक्ष्मी गुरुङ, सोही स्थानका १९ बर्षीय बिकाश धिमाल र १९ बर्षकै रितिक बस्नेत रहेका छन । हिजो साँझ साढे ५ बजे प्रहरी चौकी बिराटचोकबाट खटिएको प्रहरी चेकीङ टोलीले मोटरसाईकलमा आएका […]
कास्कीमा सडकको काम गरिरहेका ७ मजदुर पुरिए
मंसीर १५, कास्की । कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका-२० स्थित मौजामा सडकको काम गरिरहेका ७ मजदुरहरु नाली खन्ने क्रममा ढिस्कोले पुरिएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाको कनेक्टिभिटी रोड योजना अन्तर्गत काम भइरहेको थियो। ढिस्को खस्दा खस्दै २ जना भाग्न सफल भएको र ५ जना पुरिएको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन् । पुरिने सबै सल्यान […]
सुनसरीमा भयानक दुर्घटना : ट्रक र एम्बुलेन्स ठोक्किँदा ७ जनाको मृत्यु
१५ मंसिर, विराटनगर । सुनसरी जिल्लामा एम्बुलेन्स र ट्रक एकआपसमा ठोक्किँदा ७ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार एम्बुलेन्समा १ महिला र ६ पुरुष सवार थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीका अनुसार घटना लौकी नजिकै भएको हो । विराटनगरस्थित गोल्डेन अस्पतालबाट शव बोकेर उदयपुर जाँदै गरेको एम्बुलेन्स र वीरगंजबाट विराटनगर जाँदै गरेको ट्रकसँग एकआपसमा […]
दुर्घटनावाट ३ को मृत्यु, १३ जना घाइते
१३ मंसिर, काठमाडौं । सुर्खेतबाट दैलेख जाँदै गरेको भे१ज १०२९ नम्बरको गाडी गुराँस गाउँपालिका-४ मुङ्ग्राहामा दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु र १३ जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेहरुमा सुर्खेत खजुराका मंगली गुरुङ, सुब्बाकुनाका देवीप्रसाद सुवेदी, धुलियाबिटकी चन्द्रकली सिङ्गौली, तातापानीका मोहन परियार, सोही ठाउँकी झुमा परियार, चन्द्रा परियार, भीम परियार, दैलेख दुल्लु नगरपालिकाका अविषेक योगी, […]
१३ मंसिर, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ८ किलो सुनसहित दुई जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका छन् । नियमित जाँचका क्रममा उनीहरु समातिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले बताएको छ । पक्राउ पर्नेमा इएच ६५९६६३७ नम्बरको राहदानी बाहक चेन होङयाङ र इए ५८०७५९८ नम्बर राहदानीका चेन क्वीनहाङ छन् । विमानस्थल प्रहरीका प्रमुख डीआईजी सूर्य उपाध्यायका […]
नेकपा उम्मेदवारको घरमा बिस्फोट
१२ मंसिर, जनकपुरधाम । महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदका लागि नेकपाका उम्मेदवार बिक्रम चौधरीको घरमा बिहीबार साँझ बम बिस्फोट भएको छ । चौधरीको शौचालय अगाडि प्रेसर कुकुर बम बिस्फोट भएको देखिएको छ । क्षति केही भएको छैन । पिपरामा मंसिर १४ गते गाउँपालिका अध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
अर्घाखाँची बस दुर्घटना : १९ जनाको मृत्यु (अपडेट)
११ मंसिर, काठमाडौं । अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धीखर्क नगरपालिका-६, नरपानीमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या १९ पुगेको छ । सन्धीखर्कबाट बुटवलतर्फ आउँदै गरेको लु२ख २१४८ नम्बरको गाडी सडकबाट करिब ४०० मिटर तल खसेको छ । दुर्घटनामा अन्य १३ जना घाइते छन् । दुर्घटनामा नं. ५ बाहिनी रुपन्देहीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी जवान राजकुमार महतको मृत्यु भएको […]